တုန့်ပြန်နိုင်သေးသည်ဆိုသည်ကို ရခိုင်အမျိုးသားများနှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှုမြတ်နိုးသော တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး သတိ၊ အသိရှိသင့်ကြပေသည်။ အကြောင်းမှာ ဤကိစ္စမျိုးသည် သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုး တခုတည်း ဘာသာတခုတည်းနှင့်သာ ဆိုင်သည်မဟုတ်ပဲ ယဉ်ကျေးသော လူ့အသိုင်းဝိုင်းတခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
The National Register of Historic Places is the United States government’s official compilation of cultural resources that are significant for the local area, state, region and nation. It was created by the Congress in 1966 with the enactment of the National Historic Preservation Act (NHPA). 1
ရခိုင်နိုင်ငံတော်သည် ဗမာနယ်ချဲ့ပဒေသ ရာဇ် မောင်ဝိုင်း မကြေငြာပဲ အလစ်ချောင်းတိုက်သော အဓမ္မစစ်ပွဲကြောင့်၊၁၇၈၄ ခုနှစ် ၃၁ဒီဇင်ဘာညတွင် အောင်လံ မြီခ၊ထီးနန်းကျ၍ နယ်ချဲ့လက်အောက် ကျွန်သဘောက်ဘ၀သို့ကျရောက်ခဲ့ရသည်။
Ancient city in western Burma's Arakan State Mrauk U: Many cultural heritage sites have been destroyed as military authorities have bulldozedapath for constructingarailroad throughamajor archaeological zone in Mrauk U, an ancient city in western Burma's Arakan State. A local archaeologist told Narinjara that the construction of the railroad through the city started on7November, and many ancient structures built by 14th century Arakanese cultures have already been damaged.
Andaw Thein pagodas in Mrauk U, where locals complain thatarailroad project could damage historic structures (Jean-Marie Hullot) Residents have reacted with anger toarailroad development that will cut through the historically important town of Mrauk U in Arakan state, which at its zenith wasamajor international trading hub.
စစ်တွေ - အမ်း ရထားလမ်းကို အကြောင်းပြပြီး ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ ရှိ ရခိုင်ရှေ့ဟောင်း စေတီ၊ ပုထိုးများ၊ ကျုံးများကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့်က စတင်ပြီး မြေတူး စက်များဖြင့် ဖြိုဖျက်နေကြောင်း မြောက်ဦး မြို့ခံများက နိရဉ္စရာသို့ ပြော သည်။ ယခု ဖြိုဖျက်ခံနေရသည့် ဘုရားများနှင့် သမိုင်းဝင်နေရာ အမည်များကို မြောက်ဦးမြို့မှ သမိုင်း သုတေသီ တဦးက ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။
စနစ်တကျဖျက်ဆီးခံနေရသော ရခိုင့်ရှေးဟောင်းမြို့တော် မြောက်ဦး
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ on 5:48 AM
သတင်းထောက်မှတ်စု ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်လက်ရာတွေ များပြားလှတဲ့ မြောက်ဦးဒေသမှာလည်း သေချာထိမ်းသိမ်းမှုမရှိတာကြောင့် အဖိုးတန် ရှေးဟောင်း ဗိသုကာလက်ရာတွေ ဒီလိုပဲ ပျက်ယွင်းဆုံးရှုံးသွားရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ဦးမြို့ကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မမြင့်မြင့်ခိုင်က သတင်းထောက်တယောက်ရဲ့ မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေ တင်ပြထားပါတယ်။